Amathiphu angu-7 Okukusiza Ukwehlisa Izindleko Zephrojekthi Yepulazi Lomoya Ogwini Lolwandle - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Amaphrojekthi omoya wasogwini makhulu futhi ayabiza. Izindleko zokwakha ipulazi lomoya ogwini lolwandle zingenye yezithiyo ezinkulu endleleni yokwamukelwa kwamandla avuselelekayo. Lapho iphrojekthi iphumelela, ikhiqiza amandla athembekile, avuselelekayo. Kodwa izindleko zisengaba phezulu. Kulesi sihloko, funda izindlela eziyisikhombisa zokugcina iphrojekthi yakho yepulazi lomoya... Funda kabanzi
I-Drones Enza Umhlaba Kanjani Indawo Engcono
Umhlahlandlela Wokuhamba Wangaphakathi oya eManali
Amaphrojekthi omoya wasogwini makhulu futhi ayabiza. Izindleko zokwakha ipulazi lomoya ogwini lolwandle zingenye yezithiyo ezinkulu endleleni yokwamukelwa kwamandla avuselelekayo. Lapho iphrojekthi iphumelela, ikhiqiza amandla athembekile, avuselelekayo. Kodwa izindleko zisengaba phezulu. Kulesi sihloko, funda izindlela eziyisikhombisa zokugcina iphrojekthi yakho yepulazi lomoya iphansi futhi uthole ibhalansi ephelele phakathi kwentengo nekhwalithi.
Sebenzisa Izingxenye Nezisetshenziswa Zekhwalithi Ephezulu
Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokunciphisa izindleko ukusebenzisa imishini yekhwalithi ephezulu evela kubakhiqizi abaziwayo. Kumaphrojekthi wepulazi lomoya ogwini lolwandle, lokhu kungasho ukusebenzisa okokusebenza kwe-IHC IQIP. Imishini yokwakha yekhwalithi ephezulu iqinisekisa ukuhamba komsebenzi okungaguquki futhi inciphisa isikhathi sokuphumula, kuyilapho izingxenye ezithembekile zivimbela ukubambezeleka okumba eqolo okuholela ekudluleleni kwezindleko ezibalulekile.
Uma uchitha imali eningi, ukuqasha amagiya okwakha ekhwalithi ephezulu kwenza umqondo wezezimali: Kuzonciphisa isikhathi sokuphumula, esivame ukubiza kakhulu kunokuqasha imishini yekhwalithi ephezulu kwasekuqaleni. Futhi, kubalulekile ukuqaphela ukuthi ubukhulu bokusebenza kwakho akusona isizathu sokwehluleka ukuhlela kahle ukuthi ungakanani okokusebenza okudingayo nokuthi hlobo luni olungafanela kangcono izidingo zakho. Ungakwazi chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane kumishini engcono kakhulu yamaphrojekthi aphesheya kwezilwandle.
Yiba Nohlelo Lokulawula Ubungozi Olunesibopho Nesisebenzayo
Ukuba sengozini enkulu akusho ngaso sonke isikhathi ukuthi kuzoba nengozi enkulu. Izingozi zingafika ngezindlela eziningi—kusukela emikhiqizweni enesici noma izinto ezisetshenziswayo kuya ekulimaleni kwabasebenzi. Okubalulekile ukubhekana nalezi zinkinga ngokushesha, ukuze bangabi naso isikhathi sokudlala iqhwa baye kokuthile okuyinkinga kakhulu phansi komugqa. Qiniseka ukuthi usungula izinqubo eziqinile zezempilo nezokuphepha, kanye nohlelo lwesinyathelo esiphuthumayo; ngokuphatha lezi zinkinga ngokuqhubekayo kusukela osukwini lokuqala, unganciphisa ngokuphawulekayo amathuba akho okuhlangabezana nanoma yiziphi izinkinga ngokuqhubekayo phansi komgwaqo.
Beka Isikhathi Eceleni Sokuhlola Nokuhlaziya
Uma usulungise yonke into, kungase kubonakale sengathi umsebenzi wakho usuphelile—kodwa lokho ngeke kuqhubeke eqinisweni. Njengamaphrojekthi amaningi, ukuhlola nokuhlaziya kuyizici ezibalulekile ezikuvumela ukuthi uhlale uqaphela zonke izisetshenziswa zakho ngokuhamba kwesikhathi.
Isibonelo, ukuhlola okuvamile kungasiza ukugcina izinto zilawulwa uma i-turbine eyodwa yehluleka ngaphambi kokuba iphume ekulawuleni futhi ikubize kakhulu. Lapho wakha ipulazi lakho lomoya, qiniseka ukuthi uhlola izikhathi ezithile futhi uhlaziye umugqa wakho wesikhathi uwonke noma ibhajethi ukuze ukwazi ukumboza zonke izisekelo zakho kusenesikhathi.
Cabangela Izinketho Zokulungisa Ucwaningo
Nakuba ukunakekelwa kuvame ukuwela ngaphansi kokunakekelwa okuvamile, kudlala indima ebalulekile ekwehliseni izindleko zizonke. Imishini enakekelwa ngokwanele isho izindleko zokulungisa eziphansi kanye nokwelulwa kwesikhathi sokuphila—okuhumushela ezindlekweni ezimbalwa ngokuhamba kwesikhathi. Akumele ulinde kuze kunqamuke okuthile ukuze uqale ukunakekela okokusebenza kwakho! Ukuhlela ukuhlolwa okuvamile kungakongela imali eningi ekulungiseni okuvimbelayo kamuva, okukuvumela ukuthi ulungise izinkinga ezincane ngaphambi kokuba zibe ezinkulu.
Ukusebenzisa Izixazululo Ezididiyelwe Nezisetshenziswa
Ezimweni eziningi, amapulazi omoya aphesheya kwezilwandle athatha isikhathi eside ukusuka ekuthuthukisweni kuya eqinisweni. Isikhathi sikhulu ngenxa yabo bonke abathintekayo kulolu hlelo. Izinhlangano ezihlukene noma izinkampani ziphethe ukuhlela, ukuxhasa ngezimali, ubunjiniyela kanye nokwakha. Nokho, le ndlela ivame ukubiza kakhulu. Iqembu ngalinye lilandela izinqubo zalo kanye nezikhathi, okwenza kube inselele ukuhlanganisa.
Nokho, izixazululo ezididiyelwe kanye nemishini kusiza ukwenza Umoya wasolwandle nezinto ezivuselelekayo amaphrojekthi bushelelezi. Kubandakanya ukuklama isixazululo samandla amasha ngesikhathi esisodwa lapho inkampani eyodwa iphethe ingxenye yephrojekthi ngayinye. Izindlela ezididiyelwe ezifana nokusebenzisa Isifaki Esihlanganisiwe Se-Monopile esivela ku-IQIP, isixazululo esididiyelwe sokunciphisa umsindo nezici zokufaka. Ngakho-ke, i-Integrated Monopile Installer isiza ukudala indawo ekahle yokusebenza futhi inciphisa isikhathi sokufaka ama-monopiles amakhulu.
Qasha Inkampani Enezinto Ezihlukahlukene Nezinsizakalo Ukuze Ukhulise Ukusebenza Kahle
Enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokunciphisa izindleko iwukuvumela inkampani ukuthi isebenze kuphrojekthi yakho ngezinhlobonhlobo zezinsizakalo nemishini. Isibonelo, qasha inkampani enganikezela ngezinto zokwakha futhi ikwakhele zona. Ikhono lenkampani lokuhlinzeka kanye nokwakha izinto zokwakha lizokhuphula ukusebenza kahle ngoba usebenzisana nomphakeli oyedwa nje.
Ukwengeza, kuzoba lula ukulungisa okokusebenza uma kunesidingo. Ukwenza kanjalo kungakusiza ukuthi wonge kufikela kumaphesenti angama-20 ezindlekweni, kuye ngokuthi yini oyidingayo. Khuluma nenkampani ye-IHC IQIP ngokuthi ingafinyelela kanjani lokhu konga—ungamangala ukuthi kulula kangakanani!
Ukukhulisa Iwindi Lokufaka I-Offshore Monopile
Ukufaka izinjini zomoya zasolwandle ezisekelweni ze-monopile kungenye yezindlela zanamuhla ezingabizi kakhulu zokusebenzisa amandla omoya. Kodwa-ke, njengoba kunenani elilinganiselwe kuphela lezikhathi ezifanele zokwakha kunoma yimuphi unyaka, ukufaka amapulazi omoya asogwini phakathi kwala mafasitela amafushane kubalulekile.
Kuzodingeka unciphise ukubambezeleka kokwakha futhi ulungele lapho iwindi lakho lokufaka elifanelekile livuleka unyaka ngamunye. Naka ukulinganiselwa kwamandla ngesikhathi sokuqala: Isikhathi esifanele sokuthuthukiswa kwamapulazi omoya asogwini sincike kakhulu ekutholakaleni kwesizini kanye nemikhawulo yamandla echwebeni noma ezikhungweni zamachweba.
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zezinjini zomoya zasogwini lolwandle, kodwa zonke kufanele zabelane ngezinkinga ezithile ezivamile: izilwandle ezinkulu zesisekelo sazo, izinjini zomoya ezinkulu zesisindo sazo, nezintengo eziphakeme zokwakhiwa kwazo. Awukho umklamo ohamba phambili kuzo zonke izici. Noma kunjalo, inkomba ejwayelekile ebheke ezindlekweni eziphansi - izixazululo ezididiyelwe kanye nemishini yokwakha efana nemishini ye-IHC IQIP, ochwepheshe abanamakhono, ukunciphisa ubungozi, nokuhlanganiswa kobuchwepheshe besimanje - kuzoqhubeka.